Ederede nke Jordan Feise na Martech Zone |
Edemede site na Jordan Feise
Jordan Feise bụ Influencer Marketing Manager na Traackr, ikpo okwu njikwa influencer. Jọdan nwere obi uto banyere iwulite mmekorita ya na ndi na-eche echiche ohuru na ndi na-agbanwe mgbanwe n’ime oghere ahia. Nwere onwe gị iji tweet @jfeiseee na ajụjụ niile metụtara mmekọrịta gị na-emetụta mmekọrịta gị na ya.
Etu ị ga - esi nweta Mgbanwe Dijitalụ na Mmekọahụ
Thursday, January 26, 2017 Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Jordan Feise
Ahịa gị na-aghọtakwu, ike, achọ, nghọta, na ihe siri ike. Usoro na usoro nke oge gara aga adabaghị na otu ndị mmadụ si eme mkpebi na dijitalụ na njikọ ụwa taa. Site na itinye n'ọrụ ndị na-ere ahịa teknụzụ nwere ike isi metụta ụzọ ndị ahịa si ele njem ndị ahịa anya. N'ezie, 34% nke mgbanwe dijitalụ bụ ndị CMO na-eduzi ma e jiri ya tụnyere naanị 19% nke CTO na CIO na-ebute ụzọ. Maka ndị na-ere ahịa, mgbanwe a na-abịa dị ka a